32-bit rutsigiro haichazowanikwa mune inotevera vhezheni yeUbuntu Mate naBudgie | Linux Vakapindwa muropa
Zvakanaka munguva pfupi yapfuura iye Ubuntu Mate mutungamiri wekuvandudza Kubudikidza nechitaurwa pablog rekuparadzira, akazivisa kuti kutenderera kweiyo ichave inotevera vhezheni yeUbuntu Mate 18.10 yatanga uye zvakare tizivisei kuti vakaita sarudzo.
Ivo vaviri pamwe nechikwata chake vasarudza kusiya kuvandudzwa kweiyo 32-bit vhezheni yeUbuntu Mate 18.10, saka iyi vhezheni 18.04 ndiyo yazvino uye zvakare ichave nerutsigiro zvakananga kubva kuchikwata chako kwemakore matatu ichiwedzera mamwe makore maviri ekukosha kutsigira rutsigiro kubva kuCanonical.
1 Ubuntu Mate inodonha 32-bit rutsigiro
2 Ubuntu Budgie anoramba kuenderera 32-bit rutsigiro
Ubuntu Mate inodonha 32-bit rutsigiro
Martin Wimpress Ubuntu Mate mutungamiri weprojekiti inotiudza kuti sarudzo iyi Yakatorwa zvichibva pakudiwa kwekutsigirwa kweichi chivakwa.
Naizvozvo, zvichibva pamhedzisiro yakawanikwa, ruzivo rwunovaratidza kuti isingasviki gumi% yevashandisi vekuparadzira ndivo avo vachiri kushandisa ichi chivakwaPamusoro peiyi muzana, vazhinji vanosarudza kuisa i386 mifananidzo pane amd64 Hardware.
Uye zvakare, zvikwata zvine ichi chivakwa kwavanogona kuita bvunzo dzavo dzekugadzirisa uye kuburitsa zvine mashoma.
Kune rumwe rutivi, zvese zviri zviviri zvinodiwa nechikwata chako govera iyo nguva yakachengetedzwa nekubvisa i386 mifananidzo (32-bit Intel) kutsigira zvirinani zvigadzirwa zveARM, seRaspberry Pi.
Pakupedzisira, iyo imwe data yaunogovana yekuongorora kwavo ndeinotevera:
Kunyorera uye vatengesi vevatyairi vari (kana kuti vatove) vakatsigira i386 (Intel 32-bit). Nvidia rutsigiro rwakabviswa nguva pfupi yadarika, Mozilla yekumusoro inongotsigira amd (Intel 64-bit), Google Chrome yakadonhedza i386 (Intel 32-bit) makore mashoma apfuura sevamwe vazhinji.
Zvazvino i386 zvishandiso (Intel 32-bit) zvakagadzirwa makore gumi apfuura, vateereri veichi chivakwa chiri kudzikira.
Ubuntu Budgie anoramba kuenderera 32-bit rutsigiro
ari Vagadziri veBudgie ndivo vakatanga kudzikira nekuenderera mberi vachitsigira ichi chivakwa mazuva pamberi pechikwata chaMate chakapindawo.
David Mohammed Mutungamiriri weiyo Ubuntu Budgi chirongwa chekuvandudzaIni ndinongotaura kuti rutsigiro kubva kuchikwata chake rweiyo inotevera vhezheni 18.10 haichazopihwa, nekuti iye anoti vangangoita vese vashandisi vane makomputa 64-bit.
LaMashoko aakagovana ndiwo aitevera.
"Isu takave nekubudirira Ubuntu Budgie 18.04 LTS kuburitswa uye izvozvi tave munzira yakazara yekuronga ye18.10.
"Zvakafanana nesarudzo yakaitwa naUbuntu pachavo muna 17.10, tafunga kuisa pfungwa dzedu dzose pakuburitsa mufananidzo wakanaka zvichibva pahardware iyo mese yamunoshandisa nhasi."
"Kubva muna18.10, tinoda kutarisa ku64-bit ISO chete."
Uyewo, Ini ndinotaura kuti avo vashandisi vanonyatsoda 32-bit vhezheni vanoshandisa vhezheni 18.04 Zvakanaka, iyi LTS uye ichatsigirwa kusvika 2021.
Nokukurumidza kana gare gare kushandiswa kwekuvakwa uku kwaizofanira kuiswa parutivi nekuti nekufamba kwenguva uye kukura kukuru kwehunyanzvi hutsva, vagadziri vanofanirwa kuchinjika kune izvi uye kune yakanyanya kudiwa.
Uye haisi yekuvapa mhosva nekuti musika wakadaro, isu tinofanirwa kunge tiri mukusimudzira nguva dzose uye tisanamatira pane imwechete poindi.
Mamiriro acho akareruka, semaARM processors ari kutanga kuburitsa kudiwa kukuru Izvo zvakachipa, semuenzaniso tinayo neiyo Raspberry Pi uye akafanana muhomwe makomputa.
Kunyangwe isu tisingakwanise kutenga iko kuita chaiko pakati peizvi, mutsauko uyu mutengo unoita mutsauko.
Kuchave nevazhinji vachataura kuti ichi hachigone kuve chinongedzo, asi kana iwe ukafunga nezve zvausingakwanise mukushandisa kwe32-bit tekinoroji uye nekushandisa kweArM iyo inokupa iwe yakawanda mikana yakawanda uye makuru mapurojekiti ari iwo unogona kuita, sarudzo ndosaka icharamba iine rutsigiro uye nekushandisa kukuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » 32-bit rutsigiro haichazowanikwa mune inotevera vhezheni yeUbuntu Mate naBudgie
Valentina naSeamly2D: maviri anoratidza iwe unofanirwa kuziva kana iwe uchida fashoni